डाटा सुरक्षा जानकारी, कुकी प्रयोग र अस्वीकरण - www.amp-cloud.de
डाटा सुरक्षा, कुकिज र दायित्व
डाटा सुरक्षा सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्:
कुकीहरूको प्रयोगमा नोट पाठ खोल्नको लागि तलको बटन प्रयोग गर्नुहोस्, जुन तपाईं सम्बन्धित डाटा सुरक्षा सेटिंग्स परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
कुकी प्रयोगको लागि सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्
Www.amp-cloud.de को सामग्रीको सम्बन्धमा दायित्व:
Www.amp-cloud.de को पृष्ठहरूको सामग्री धेरै ध्यान दिएर बनाइएको हो। कुनै सामग्रीको शुद्धता, पूर्णता र सामयिकताको लागि कुनै ग्यारेन्टी दिइदैन। एक सेवा प्रदायकको रूपमा, amp Para अनुच्छेद १ TMG अनुसार जिम्मेवारी www.amp-cloud.de को पृष्ठहरूमा आफ्नै सामग्रीको लागि सामान्य कानूनको साथ लागू हुन्छ। §§ to देखि १० टीएमजीका अनुसार, जहाँसम्म, सेवा प्रदायकको रूपमा प्रसारित वा भण्डारण गरिएको तेस्रो-पक्ष जानकारी निगरानी गर्न वा गैरकानुनी गतिविधि सूचित गर्ने परिस्थितिहरूको छानबिन गर्न कुनै बाध्यता छैन। सामान्य कानून अनुसार जानकारी को उपयोग हटाउन वा रोक्न बाध्यता अप्रभावित नै रहन्छ। यद्यपि यस सन्दर्भको लागि दायित्व सब भन्दा चाँडो नै सम्भव छ बिन्दुबाट जुन समयमा हामी एक विशिष्ट कानुनी उल्ल .्घनको बारेमा सचेत भयौं। हामीले कानुनी उल्ल .्घन सम्बन्धी सजग हुने बित्तिकै यो सामग्री सकेसम्म चाँडो हटाइनेछ।
Www.amp-cloud.de मा लिंकहरूको सम्बन्धमा दायित्व:
Www.amp-cloud.de बाट प्रस्तावले बाह्य तेस्रो-पार्टी वेबसाईटहरूमा लिंकहरू समावेश गर्न सक्दछ जसको सामग्रीमा www.amp-cloud.de को अपरेटरको कुनै प्रभाव छैन। त्यसकारण यस बाह्य सामग्रीको लागि कुनै ग्यारेन्टी दिइएन। पृष्ठहरूको सम्बन्धित प्रदायक वा अपरेटर लि the्क गरिएको पृष्ठहरूको सामग्रीको लागि सँधै जिम्मेवार हुन्छ। यदि हामी कानुनी उल्ल .्घनको बारेमा सचेत भयौं भने, त्यस्ता लिंकहरू सकेसम्म चाँडो हटाइनेछ।
एक नजर मा डाटा सुरक्षा:
निम्न जानकारीले तपाइँको व्यक्तिगत डेटालाई के हुन्छ भन्ने बारे सरसर सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ जब तपाइँ हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहुन्छ। व्यक्तिगत डाटा सबै डाटा हुन् जुन तपाईं व्यक्तिगत पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यस टेक्स्ट मुनिको डेटा संरक्षण घोषणामा डाटा सुरक्षाको बिषयमा विस्तृत जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
हाम्रो वेबसाइट मा डाटा संग्रह
यस वेबसाइटमा डाटा स for्कलनका लागि को जिम्मेवार छ?
यस वेबसाइटमा डाटा प्रोसेसिंग वेबसाइट अपरेटरबाट गरिन्छ। तपाईं आफ्नो वेबसाइटको छापमा उनीहरूको सम्पर्क विवरणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
हामी कसरी तपाइँको डेटा स collect्कलन गर्ने?
एकातिर, तपाईंको डाटा संकलन गरिन्छ जब तपाईं हामीलाई यो प्रदान गर्नुहुन्छ। यो, उदाहरण को लागी, डेटा हुन सक्छ जुन तपाइँ एक सम्पर्क फारम मा प्रविष्ट गर्नुभयो।
अन्य डाटा स्वचालित रूपमा हाम्रो आईटी प्रणाली द्वारा रेकर्ड गरिएको छ जब तपाईं वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ। यो मुख्यतया प्राविधिक डेटा हो (उदाहरण इन्टरनेट ब्राउजर, अपरेटि system प्रणाली वा पृष्ठ दृश्यको समय)। यो डाटा तपाईले हाम्रो वेबसाइट प्रविष्ट गर्ने बित्तिकै स्वचालित रूपमा स .्कलन गरिएको छ।
हामी तपाईको डेटा को लागी कसरी प्रयोग गर्छौं?
तपाईंसँग कुनै पनि समयमा नि: शुल्क भण्डारण गरिएको व्यक्तिगत डाटाको उत्पत्ति, प्रापक र उद्देश्यको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार छ। तपाईंसँग पनि यो डाटाको सुधार, अवरुद्ध वा मेटाउन अनुरोध गर्ने अधिकार छ। कानूनी सूचनामा दिइएको ठेगानामा तपाईले हामीलाई कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईसँग डेटा संरक्षण को बारे मा केहि प्रश्न छन् भने। तपाइँसँग सक्षम सुपरवाइजरी प्राधिकारीसँग गुनासो दर्ता गर्ने अधिकार पनि छ।
विश्लेषण उपकरणहरू र तेस्रो-पार्टी उपकरणहरू
जब तपाईं हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईंको सर्फिंग व्यवहार तथ्याically्कवादी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यो मुख्य रूपमा कुकीहरू र तथाकथित विश्लेषण कार्यक्रमहरूको साथ गरिन्छ। तपाईंको सर्फिंग व्यवहार सामान्यतया अज्ञात रूपमा विश्लेषण गरिन्छ; सर्फिंग व्यवहार तपाइँलाई फिर्ता खोज्न सकिदैन। तपाईं यस विश्लेषणलाई आपत्ति गर्न सक्नुहुन्छ वा केही उपकरणहरू प्रयोग नगरी यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसका बारे विस्तृत जानकारी निम्न डाटा संरक्षण घोषणामा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं यस विश्लेषणलाई आपत्ति गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यस डेटा संरक्षण घोषणा मा आपत्ति सम्भावनाको बारेमा सूचित गर्नेछौं।
सामान्य जानकारी र अनिवार्य जानकारी:
यस वेबसाइटका अपरेटरहरूले तपाईको व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षालाई धेरै गम्भीरताका साथ लिन्छन्। हामी तपाइँको व्यक्तिगत लगत गोप्य रूपमा र वैधानिक डेटा संरक्षण नियमहरु र यो डेटा सुरक्षा घोषणा को बमोजिम व्यवहार गर्दछौं।
जब तपाईं यो वेबसाइट प्रयोग गर्नुहुन्छ, विभिन्न व्यक्तिगत डाटा स collected्कलन गरिन्छ। व्यक्तिगत डाटा डाटा हो जुन तपाईं व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। यो डाटा सुरक्षा घोषणाले हामी कुन डेटा हामी स and्कलन गर्छौं र हामी यसको लागि के प्रयोग गर्छौं भनेर वर्णन गर्दछ। यसले कसरी र के उद्देश्यका लागि गरिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ।
हामी औंल्याउन चाहन्छौं कि इन्टरनेटमा डाटा ट्रान्समिशन (उदाहरण ईमेल द्वारा सञ्चार गर्दा) सुरक्षा खाली हुन सक्छ। तेस्रो पक्षहरूद्वारा पहुँच बिरूद्ध डाटाको पूर्ण सुरक्षा सम्भव छैन।
जिम्मेदार निकायमा नोट गर्नुहोस्
यस वेबसाइटमा डाटा प्रोसेसिंगका लागि जिम्मेवार निकाय हो:
जिम्मेवार निकाय एक प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्ति हो, जो एक्लै वा अरूसँग संयुक्त रूपमा, व्यक्तिगत डेटा प्रशोधनको उद्देश्यहरू र साधनहरू (उदाहरणका लागि नाम, ईमेल ठेगानाहरू, इत्यादि) मा निर्णय लिन्छ।
डाटा प्रोसेसिंगमा तपाईंको सहमति रद्द
धेरै डाटा प्रोसेसिंग कार्यहरू तपाईको अभिव्यक्त सहमतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ। तपाईं कुनै पनि समयमा तपाईंको सहमति रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई अनौपचारिक इ-मेल पर्याप्त छ। रिभोकेसन अगाडि गरिएको डाटा प्रोसेसिंगको वैधता रिभोकेशनबाट अप्रभावित रहन्छ।
जिम्मेवार पर्यवेक्षी अधिकारीलाई अपीलको अधिकार
डेटा पोर्टेबिलिटीको दायाँ
तपाईंसँग डाटा छ कि हामीसँग तपाईंको सहमतिको आधारमा स्वचालित रूपमा प्रक्रिया हुन्छौं वा सम्झौताको पूर्तिमा तपाईं वा तपाईंलाई साधारण, मेशिन-पठनीय ढाँचामा तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको सौदा। यदि तपाईं जिम्मेवार अर्को व्यक्तिलाई डाटाको सीधा स्थानान्तरणको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ, यो त मात्र गरिन्छ यदि यो तकनीकी रूपमा सम्भव छ।
जानकारी, अवरुद्ध, मेटाउने
लागू हुने वैधानिक प्रावधानहरूको रूपरेखा भित्र, तपाईंसँग तपाईंको भण्डारित व्यक्तिगत डाटा, उनीहरूको उत्पत्ति र प्राप्तकर्ता र डाटा प्रसंस्करणको उद्देश्यको बारेमा स्वतन्त्र जानकारीको अधिकार छ र, आवश्यक भएमा यो डाटा सुधार गर्न, रोक्ने वा मेटाउने अधिकार। तपाईले हामीलाई कुनै पनि समयमा कानुनी सूचनामा दिइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईको व्यक्तिगत डेटाको विषयमा अरु प्रश्नहरू छन् भने।
विज्ञापन मेलमा आपत्ति
हामी यस द्वारा अनावश्यक विज्ञापन र सूचना सामग्री पठाउनको लागि छाप बाध्यताको संदर्भमा प्रकाशित सम्पर्क डाटाको प्रयोगमा आपत्ति गर्दछौं। पृष्ठहरूको अपरेटरहरूले ब्यक्तिगत स्प्याम ईमेलहरू जस्ता विज्ञापन जानकारी पठाउने घटनामा कानुनी कारबाहीको अधिकार स्पष्ट रूपमा राख्दछ।
हाम्रो वेबसाइट मा डाटा संग्रह:
केहि इन्टरनेट पृष्ठहरूले तथाकथित कुकीहरू प्रयोग गर्छन्। कुकीहरूले तपाइँको कम्प्युटरमा कुनै नोक्सान गर्दैन र भाइरसहरू समावेश गर्दैन। कुकीज हाम्रो प्रस्ताव अधिक उपयोगकर्ता को अनुकूल, अधिक प्रभावी र सुरक्षित बनाउन को लागी सेवा प्रदान गर्दछ। कुकीहरू साना पाठ फाईलहरू हुन् जुन तपाईंको कम्प्युटरमा भण्डार गरिएको छ र तपाईंको ब्राउजर द्वारा सुरक्षित गरिएको छ।
धेरै जसो कुकीहरू हामी प्रयोग गर्छौं तथाकथित "सत्र कुकीज" हुन्। ती तपाइँको भ्रमण पछि स्वचालित रूपमा मेटिने छन्। अन्य कुकीहरू तपाईंको उपकरणमा भण्डारण रहन्छ जुन तपाईं तिनीहरूलाई मेटाउनुहुन्न। यी कुकीजले हामीलाई तपाईंको ब्राउजर अर्को पटक भेट्न पहिचान गर्न सक्षम गर्दछ।
तपाईं आफ्नो ब्राउजर सेट गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईंलाई कुकीजको सेटिंगको बारेमा जानकारी दिइनेछ र व्यक्तिगत केसहरूमा मात्र कुकीहरूलाई अनुमति दिनुहोस्, खास केसहरू वा सामान्यतया कुकिजको स्वीकृति बहिष्कार गर्नुहोस्, र ब्राउजर बन्द गर्दा स्वचालित रूपमा कुकीजको मेटाउने सक्रिय गर्नुहोस्। यदि कुकिज निष्क्रिय भएमा, यस वेबसाइटको कार्यक्षमता प्रतिबन्धित हुन सक्छ।
कुकीहरू जुन विद्युतीय संचार प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ वा केही आवश्यक प्रकार्यहरू प्रदान गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ (उदाहरणका लागि किनमेल कार्ट समारोह) आर्ट6प्यारा १ लिटको आधारमा भण्डारण गरिन्छ।fGDPR बचत भयो। वेबसाइट अपरेटरले यसको सेवाहरूको प्राविधिक त्रुटिमुक्त र अनुकूलित प्रावधानको लागि कुकीहरू भण्डारण गर्न वैध चासो राख्दछ। Insofar को रूपमा अन्य कुकीहरू (उदाहरणका लागि तपाइँको सर्फिंग ब्यवहार विश्लेषणको लागि कुकीहरू) भण्डारण गरिएका छन्, यी डेटा संरक्षण घोषणामा छुट्टै उपचार गरिनेछ।
"प्रकार्य" कुकी वर्ग
"प्रकार्य" कोटिमा कुकिजहरु शुद्ध रुपमा कार्य गर्दछन् र वेबसाईटको संचालनका लागि वा केहि कार्यहरू लागू गर्नका लागि आवश्यक छन्। यस कोटि को प्रदायकहरु निष्क्रिय गर्न सकिदैन।
कुकी श्रेणी "उपयोग"
"प्रयोग" कोटीका कुकिजहरू प्रदायकहरूबाट आउँछन् जसले केही प्रकार्य वा सामग्री प्रदान गर्दछन् जस्तै सामाजिक मिडिया फंक्शनहरू, भिडियो सामग्री, फन्टहरू, इत्यादि। यस वर्गका प्रदायकहरूले पृष्ठमा सबै तत्वहरू ठीकसँग कार्य गर्दछन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्दछन्। ।
"मापन" कोटिमा कुकीहरू प्रदायकहरूबाट आउँदछन् जसले वेबसाइटको पहुँच विश्लेषण गर्न सक्दछन् (गुमनाम रूपमा, अवश्य)। यसले वेबसाइट प्रदर्शनको समीक्षा र यो कसरी विकास हुँदैछ भनेर प्रदान गर्दछ। यसबाट, उदाहरणका लागि, लामो अवधिमा साइट सुधार गर्न उपायहरू निकाल्न सकिन्छ।
"वित्त पोषण" कुकी वर्ग
"वित्तपोषण" कोटिबाट कुकीहरू प्रदायकहरूबाट आउँदछन् जसका सेवाहरूले अपरेटिंग लागत र वेबसाइटको प्रस्तावको एक हिस्सा खर्च गर्दछन्। यसले वेबसाइटको निरन्तर अस्तित्वलाई समर्थन गर्दछ।
सर्भर लग फाइलहरू
वेबसाइट प्रदायकले स्वचालित रूपमा तथाकथित सर्भर लॉग फाइलहरूमा जानकारी स col्कलन र बचत गर्दछ, जुन तपाईंको ब्राउजरले स्वचालित रूपमा हामीलाई ट्रान्समिट गर्दछ। यी हुन्:
ब्राउजर प्रकार र ब्राउजर संस्करण
अपरेटिंग प्रणाली प्रयोग भयो
एक्सेस गर्ने कम्प्युटरको होस्ट नाम
सर्भर अनुरोध को समय
यो डाटा अन्य डाटा स्रोतहरूसँग मिल्दैन।
यो डाटा आर्ट। को आधारमा संकलन गरिएको छ।fGDPR। वेबसाइट अपरेटरको टेक्निकल त्रुटि स्वतन्त्र प्रस्तुतीकरण र उसको वेबसाइटको अप्टिमाइजेशनमा वैध चासो छ - सर्भर लग फाइलहरू यसको लागि रेकर्ड गरिएको हुनुपर्दछ।
फेसबुक प्लगइनहरू (जस्तै बटन साझेदारी गर्नुहोस्)
सामाजिक नेटवर्क फेसबुक, प्रदायक फेसबुक इंक, १ ह्याकर वे, मेनलो पार्क, क्यालिफोर्निया, 40 25०२,, संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्लगइनहरू हाम्रो वेबसाइटमा एकीकृत छन्। तपाईं फेसबुक लोगो वा हाम्रो वेबसाइटमा "मनपर्दो" बटनबाट फेसबुक प्लगइनहरू चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यहाँ फेसबुक प्लगइनहरूको एक सिंहावलोकन पाउन सक्नुहुन्छ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
जब तपाईं हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, एक प्रत्यक्ष जडान तपाईंको ब्राउजर र फेसबुक सर्भर बीच प्लगइन मार्फत स्थापित हुन्छ। फेसबुकले तपाइँको आईपी ठेगानाको साथ हाम्रो साइट भ्रमण गरेको जानकारी प्राप्त गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो फेसबुक खातामा लगइन भएको बेला यदि तपाईं फेसबुक "लाइक" बटन क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो पृष्ठहरूको सामग्रीलाई तपाईंको फेसबुक प्रोफाइलमा लिंक गर्न सक्नुहुनेछ। यसले फेसबुकलाई तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको प्रयोगकर्ता खातामा तपाइँको भ्रमण प्रदान गर्न सक्षम गर्दछ। हामी त्यसलाई औंल्याउन चाहन्छौं, पृष्ठहरूको प्रदायकको रूपमा, हामीलाई डाटा प्रसारित डाटा वा फेसबुक द्वारा यसको प्रयोगको सामग्रीको ज्ञान छैन। तपाई यस बारे अधिक जानकारी फेसबुकको डाटा संरक्षण घोषणामा पाउन सक्नुहुन्छ: https://de-de.facebook.com/policy.php
यदि तपाईं चाहनुहुन्न कि फेसबुक तपाईंको वेबसाईटमा तपाईंको फेसबुक प्रयोगकर्ता खातामा तपाईंको भ्रमण असाइन गर्न सक्षम होस्, कृपया तपाईंको फेसबुक प्रयोगकर्ता खाताबाट लग आउट गर्नुहोस्।
हाम्रो पृष्ठले Google+ कार्यहरू प्रयोग गर्दछ। प्रदायक गुगल इंक, १00०० एम्फीथिएटर पार्कवे, माउन्टेन भिउ, सीए 40 40०4343, संयुक्त राज्य अमेरिका हो।
स Collection्कलन र जानकारीको प्रसार: तपाईं Google+ बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ विश्वव्यापी रूपमा जानकारी प्रकाशित गर्न। तपाईं र अन्य प्रयोगकर्ताहरू Google+ बटन मार्फत गुगल र हाम्रो पार्टनरहरूबाट निजीकृत सामग्री प्राप्त गर्दछ। गुगलले दुबै जानकारी बचत गर्दछ जुन तपाईले +१ लाई सामग्री र पृष्ठका बारे जानकारीका लागि दिनुहोस् जुन तपाईले +१ क्लिक गर्दा हेर्नुभएको थियो। तपाईंको +१ गुगल प्रोफाइलमा तपाईंको प्रोफाइल नाम र फोटोको साथ सन्दर्भको रूपमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, जस्तै खोज परिणामहरूमा वा तपाईंको गुगल प्रोफाइलमा, वा अन्य ठाउँमा वेबसाइटहरू र इन्टरनेटमा विज्ञापन।
गुगलले तपाईंको र १ गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी रेकर्ड गर्दछ तपाईं र अन्यका लागि गुगल सेवाहरू सुधार गर्नका लागि। गुगल + बटन प्रयोग गर्नका लागि तपाईलाई विश्वव्यापी रूपमा देख्न मिल्छ, सार्वजनिक गुगल प्रोफाइल चाहिन्छ जसमा प्रोफाईलको लागि कम्तिमा नाम छनौट गरिएको हुनुपर्दछ। यो नाम सबै गुगल सेवाहरूमा प्रयोग गरीन्छ। केहि अवस्थाहरूमा, यो नामले अर्को नाम परिवर्तन गर्न सक्दछ जुन तपाईंले गुगल खाता मार्फत सामग्री साझा गर्दा प्रयोग गर्नुभयो। तपाईको गुगल प्रोफाइल को पहिचान प्रयोगकर्ताहरु लाई देखाउन सकिन्छ जुन तपाईको इ-मेल ठेगाना थाहा छ वा जसको तपाईको बारेमा अरु पहिचान जानकारी छ।
स collected्कलन गरिएको जानकारीको प्रयोग: माथि उल्लेखित उद्देश्यहरूको साथसाथै, तपाईंले प्रदान गर्नुहुने जानकारी लागू गुगल डाटा संरक्षण नियमहरू अनुसार प्रयोग गरिनेछ। गुगलले प्रयोगकर्ताहरूको +१ गतिविधिको बारेमा संक्षिप्त तथ्या .्क प्रकाशित गर्न सक्छ वा तिनीहरूलाई प्रयोगकर्ताहरू र साझेदारहरू, जस्तै प्रकाशकहरू, विज्ञापनदाताहरू वा लि websites्क गरिएका वेबसाईटहरूमा पठाउन सक्छ।
विश्लेषण उपकरण र विज्ञापन:
यस वेबसाइटले वेब एनालिसिस सेवा गुगल एनालिटिक्सको प्रकार्यहरू प्रयोग गर्दछ। प्रदायक गुगल इंक, १00०० एम्फीथिएटर पार्कवे, माउन्टेन भिउ, सीए 40 40०4343, संयुक्त राज्य अमेरिका हो।
गुगल एनालिटिक्सले तथाकथित "कूकीज" प्रयोग गर्दछ। यी टेक्स्ट फाईलहरू हुन् जुन तपाईंको कम्प्युटरमा बचत गरिएका छन् र वेबसाइटको प्रयोगमा विश्लेषण गर्न सक्षम छन्। यस वेबसाईटको तपाईको प्रयोगको बारेमा कुकीले उत्पन्न गरेको जानकारी प्राय: अमेरिकामा गुगल सर्वरमा हस्तान्तरण गरिन्छ र त्यहाँ भण्डार गरिन्छ।
गुगल एनालिटिक्स कूकीजको भण्डारण आर्ट6पैरा। १ प्रकाशमा आधारित छ।fGDPR। वेबसाइट अपरेटरको प्रयोगकर्ता वेबसाइटको विज्ञापन र यसको विज्ञापन दुबै अनुकूलित गर्न व्यवहार व्यवहार विश्लेषण गर्न कानूनी रुचि छ।
हामीले यस वेबसाइटमा आईपी बेनामीकरण समारोह सक्रिय गरेका छौं। नतिजाको रूपमा, तपाईको आईपी ठेगाना यूरोपियन युनियनका सदस्य देशहरू वा यूरोपीयन आर्थिक क्षेत्र मा सम्झौताको अन्य करार राज्यहरूमा यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्नु अघि छोटा हुनेछ। पूर्ण IP ठेगाना अमेरिकामा गुगल सर्वरमा मात्र प्रसारित हुन्छ र असाधारण अवस्थामा त्यहाँ छोटो हुन्छ। यस वेबसाइटको अपरेटरको तर्फबाट, गुगलले यो जानकारी प्रयोग गर्दछ तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगको मूल्या evalu्कन गर्न, वेबसाइट गतिविधिमा रिपोर्टहरू कम्पाइल गर्न र वेबसाइट अपरेटरलाई वेबसाइट गतिविधि र इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धी अन्य सेवाहरू प्रदान गर्न। गुगल एनालिटिक्सको अंशको रूपमा तपाईंको ब्राउजरद्वारा प्रसारित गरिएको आईपी ठेगाना अन्य गुगल डाटासँग मर्ज गरिने छैन।
तपाईं त्यस अनुसार आफ्नो ब्राउजर सफ्टवेयर सेट गरेर कुकीहरूको भण्डारण रोक्न सक्नुहुन्छ; यद्यपि हामी यो देखाउन चाहान्छौं कि यस अवस्थामा तपाईं यस वेबसाइटको सबै कार्यहरू उनीहरूको पूर्ण सीमामा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्न। तपाईं गुगललाई कुकी द्वारा उत्पन्न डाटा स collecting्कलन गर्न र वेबसाईटको तपाईंको प्रयोगसँग सम्बन्धित (तपाईंको आईपी ठेगाना सहित) रोक्न सक्नुहुन्छ र तलको लिंकमा उपलब्ध ब्राउजर प्लग-इन डाउनलोड गरेर यस डाटालाई प्रशोधन गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
डाटा स against्कलनको बिरूद्ध आपत्ति
तपाईं गुगल एनालिटिक्सलाई तलको बटन क्लिक गरेर तपाईंको डाटा स collecting्कलन गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। यसले कुकिजको प्रयोगको लागि सूचना र सेटि options विकल्पहरू देखाउँदछ, "" तपाईले अक्षम बनाउनुभएकोमा क्लिक गरेर, अन्य चीजहरूको बीचमा, हाम्रो गुगल एनालिटिक्स खातामा तपाईंको डाटाको संग्रह:
गुगल एनालिटिक्स निष्क्रिय गर्न विकल्पहरू देखाउनुहोस्
अर्डर डाटा प्रोसेसिंग
हामीले गुगलसँग एउटा सम्झौता डाटा प्रोसेसिंग सम्झौता टु .्ग्याएका छौं र गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्ने बित्तिकै जर्मन डेटा सुरक्षा अधिकारीहरूको कडा आवश्यकताहरू पूर्णरूपमा लागू गर्दछौं।
गुगल एनालिटिक्समा डेमोग्राफिक सुविधाहरू
यो वेबसाइटले Google एनालिटिक्सको "डेमोग्राफिक सुविधाहरू" प्रकार्य प्रयोग गर्दछ। यसले रिपोर्टहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन उमेर, लि gender्ग र साइट आगंतुकको रुचिमा जानकारी समावेश गर्दछ। यो डाटा गुगलबाट रूचि-आधारित विज्ञापनका साथै तेस्रो-पक्ष प्रदायकहरूबाट आएका आगन्तुक डाटाबाट आउँदछ। यी डाटा विशेष व्यक्तिलाई तोक्न सकिदैन। तपाईले कुनै पनि समय यस प्रकार्यलाई असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको गुगल खाताको विज्ञापन सेटिंग्स मार्फत वा सामान्यतया गुगल एनालिटिक्स द्वारा तपाईको डेटा स collection्ग्रह गर्न निषेध गरिएको छ सेक्सन "डाटा संग्रहमा आपत्ति" मा वर्णन गरिए अनुसार। यस वेबसाइटले गुगलको "डेमोग्राफिक सुविधाहरू" प्रयोग गर्दछ। एनालिटिक्स। यसले रिपोर्टहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन उमेर, लि gender्ग र साइट आगंतुकको रुचिमा जानकारी समावेश गर्दछ। यो डाटा गुगलबाट रूचि-आधारित विज्ञापनका साथै तेस्रो-पक्ष प्रदायकहरूबाट आएका आगन्तुक डाटाबाट आउँदछ। यी डाटा विशेष व्यक्तिलाई तोक्न सकिदैन। तपाईले कुनै पनि समय यस प्रकार्यलाई असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको गुगल खाताको विज्ञापन सेटिंग्स मार्फत वा सामान्यतया गुगल एनालिटिक्स द्वारा तपाईको डेटा स collection्ग्रह गर्न निषेध गर्न सक्नुहुनेछ अनुभाग "डाटा संग्रहमा आपत्ति" मा बर्णन गरिएको अनुसार।
यस वेबसाइटले गुगल एड्सेन्स प्रयोग गर्दछ, गुगल ईंकबाट विज्ञापन एकीकृत गर्नको लागि सेवा। ("गुगल")। प्रदायक गुगल इंक, १00०० एम्फीथिएटर पार्कवे, माउन्टेन भिउ, सीए 40 40०4343, संयुक्त राज्य अमेरिका हो।
गुगल एड्सेन्सले तथाकथित "कूकीज", पाठ फाइलहरू प्रयोग गर्दछ जुन तपाईंको कम्प्युटरमा भण्डार गरिएको छ र वेबसाइटको प्रयोगको विश्लेषणको लागि अनुमति दिन्छ। Google AdSense ले तथाकथित वेब बीकनहरू (अदृश्य ग्राफिक्स) पनि प्रयोग गर्दछ। यी वेब बिकनहरू यी पृष्ठहरूमा आगंतुक ट्राफिक जस्ता जानकारीको मूल्यांकन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस वेबसाइटको प्रयोगको बारेमा कुकीहरू र वेब बिकनहरू द्वारा उत्पन्न जानकारी (तपाईंको आईपी ठेगाना सहित) र विज्ञापन ढाँचाको डिलिभरी अमेरिकामा गुगल सर्वरमा प्रसारित हुन्छ र त्यहाँ भण्डार गरिएको छ। यो जानकारी गुगल द्वारा गुगलका अनुबन्धित साझेदारहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। यद्यपि गुगलले तपाईको आईपी ठेगाना तपाईको बारेमा भण्डार गरिएको अन्य डाटासँग मर्ज गर्दैन।
एड्सेन्स कुकीहरूको भण्डारण आर्ट6पैरा। १ प्रकाशमा आधारित छ।fGDPR। वेबसाइट अपरेटरको प्रयोगकर्ता वेबसाइटको विज्ञापन र यसको विज्ञापन दुबै अनुकूलित गर्न व्यवहार व्यवहार विश्लेषण गर्न कानूनी रुचि छ।
तपाईले आफ्नो ब्राउजर सफ्टवेयर सेट गरेर कुकीहरूको स्थापना रोक्न सक्नुहुन्छ; जे होस्, हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि यस अवस्थामा तपाईं यस वेबसाइटको सबै कार्यहरू तिनीहरूको पूर्ण हदसम्म प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्न। यो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईं माथि वर्णन गरिएको तरिकामा र माथि उल्लेख गरिएको उद्देश्यका लागि गुगलले तपाईंको बारेमा स collected्कलन गरिएको डाटाको प्रशोधनमा सहमत गर्नुहुन्छ।
प्लगइनहरू र उपकरणहरू:
गुगल वेब फन्टहरू
यो पृष्ठले फन्टहरूको एक समान प्रदर्शनका लागि Google द्वारा प्रदान गरिएको तथाकथित वेब फन्टहरू प्रयोग गर्दछ। जब तपाइँ एक पृष्ठ कल गर्नुहुन्छ, तपाइँको ब्राउजरले टेक्स्ट र फन्टहरू ठीकसँग प्रदर्शन गर्नको लागि तपाइँको ब्राउजर क्यासमा आवश्यक वेब फन्टहरू लोड गर्दछ।
यस उद्देश्यका लागि तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको ब्राउजरले गुगल सर्भरमा जडान हुनुपर्दछ। यसले गुगललाई ज्ञान दिन्छ कि हाम्रो वेबसाइट तपाईंको आईपी ठेगाना मार्फत पहुँच गरिएको छ। गुगल वेब फन्टहरू एक समान र हाम्रो अनलाइन प्रस्तावहरूको अपील प्रस्तुतीकरणको हितमा प्रयोग गरिन्छ। यसले कला को अर्थ को भित्र एक वैध चासो प्रतिनिधित्व गर्दछ।fGDPR।
यदि तपाइँको ब्राउजरले वेब फन्टहरू समर्थन गर्दैन, एक मानक फन्ट तपाइँको कम्प्यूटर द्वारा प्रयोग गरिनेछ।
गुगल वेब फन्टमा थप जानकारी https://developers.google.com/fouts/faq र गुगलको गोपनीयता नीतिमा फेला पार्न सकिन्छ: